Ulawulo lokuBamkela ngokuBodwa ngokuBodwa | Malunga neZeevou
I-Zeevou liqonga ekulula ukulisebenzisa kwi-intanethi elenza ukuba ulawulo lokungenisa izihambi lubonakalise- ukusuka kwintengiso, ukubhukisha, nokusebenza. Faka endaweni yomphathi wesitishi sendabuko kunye nenkqubo yolawulo lwepropathi kunye nehabhu enye emanyeneyo.
Sizimisele ekuphuhliseni iqonga lokwamkela iindwendwe elivumela bonke abo bachaphazelekayo ukuba bakwazi ukubonisana ngokuthe ngqo nangokufanelekileyo, kuba sikholelwa ekubeni oku kuya kuba negalelo ekwenzeni umhlaba ube yindawo engcono.
Siyakholelwa ebantwini. Ngelixa iqela laseZeevou lasekwa kugxilwe kubuchwephesha bobuchwephesha kunye namava obuchwephesha afanelekileyo, sikwafuna ukubonelela ngamathuba kwabo babedinga kakhulu. Ngokukhetha iZeevou, awukhethi izisombululo ezilungileyo zeshishini lakho kuphela, kodwa utyale imali nasekuhambeni kwentlalo. Sisebenza namashishini amancinci naphakathi, siwenza akwazi ukukhuphisana namashishini amakhulu ngokubonelela ngendawo yokudlala exhaswa yitekhnoloji.
Umsunguli weZeevou, uNa'ím Anís Paymán, uyenzile injongo yobomi bakhe ukuqhubela phambili impucuko- kunye nokukhaba izinto ukuba zibonakala ngathi ziyacotha! Emva kokwenza izifundo zakhe zesidanga sokuqala kwiYunivesithi yaseCambridge kwiNzululwazi yezeNdalo, wagqiba kwelokuba andise umdla wakhe ngeshishini, ekhulisa inkampani yokuqeshisa yexeshana kumakhulu eeyunithi kwisithuba seminyaka embalwa. Ngelixa wayejongana neziphumo zolo lwando lukhawulezayo ukuba umbono kaZeevou wazalwa. Eyilwe njengesiqalo esingenantlonelo kugxilwe kubuchwephesha nakwindlela entsha, uZeevou uqhubeka phambi kwegophe ngokusebenzisa iinkqubo zobomi bokwenyani kunye nengxelo yokuhlaziya amanqaku kunye nokusebenza.
EZeevou, senza izinto ezintsha.
Umbono ayisiyokukhathaza nje uluhlu lokutshekisha olwandayo, kodwa kukubonelela ngeempawu abathengi abazifunayo ngokwenene.
Zeziphi izikhokelo ezisikhuthazayo eZeevou ngumbono wexesha elizayo wento yokubuk 'iindwendwe efanele ukuba yiyo. Sihamba phambili kutshintsho ngokujonga kakhulu izimvo zabathengi, sisebenzisa la 'maxesha okukhanya' kunye nokuqinisekisa ukuba amava kaZeevou ngawona atsalela abasebenzisi emva, kaninzi-ninzi.
Inkqubo yethu iphuhlisiwe kusetyenziswa itekhnoloji yakutshanje kwaye iqhutywa kwezinye zeeseva ezinamandla zehlabathi ukuqinisekisa amava akhawulezayo, omeleleyo kunye nethembekileyo. Ukuba oko kuvakala kukuhle kuwe… yiza uzimanye nathi!